Qiyaastii 14.6 Milyan oo ruux ayaa sanadkaan 2020 ka barakacday dalal gaaraya 127, qaarkood ayaa qaxooti noqday oo ka tallaabay Soohdinta waddamooda laga soo bilaabo janaayo ilaa Juun 2020.
Xarunta Dabagalka Barakaca Gudaha ee (IDMC) ayaa Warbixin ay soo saartay ku sheegtay in Dagaalada iyo rabshadaha ka jira wadamada caalamka in ay sababtay barakaca gudaha dalalkaas dadka intaas la eg.
Waxa ay ka badan tahay tiradaan diiwaanka dadkii barakacay sanadkii hore 2019-kii sida ay sheegtay xaruntaan qaabilsan indha-indheynta Barakacayaasha Gudaha ee loosoo yareeyo (IMDC).
Dadka waxa ay ku nool yihiin Afrika iyo Bariga Dhexe, waxaana diiwaanka ku jira Suuriya oo ku barakacday 1.5 Milyan, Jamhuuriyadda Kongada Dimuqraadiga (DRC) 1.4 Milyan oo ruux, halka Burkina Faso laga diiwaangeliyay 419,000.
Waa suuragal in tiradu intaa ka kororto, maadaama colaadda sababtay in ay firxadaan dadkaan wali ay taagan tahay, Shumaca dagaalkana uu ka ifi karo meelo xasiloon oo ay kunool dad intaan ka badan.
In the spotlight: the controversial swearing-in of the new…
Hoos u dhac ayaa ku yimid dadka ka barakacay wadamada Cameron, Mozambique, Niger iyo Soomaaliya oo sanadkii hore tiro aad u badan laga diiwaangeliyay sida Xarunta dabagalka Barakaca Gudaha ee (IDMC) Warrisay, balse waxa ay badnaayeen sanadkii 2019-kii inkasata oo ay dad ku leeyihiin qoysaska barakacay.
“Tirooyinka layaabka leh ee la diiwaan geliyay lixda bilood ee sanadka 2020 ugu horeeya waxa ay marqaati u yihiin isbedelka joogtada ah ee dhibaatooyinka barakaca ee adduunka oo dhan” Sidaasi waxaa yiri Alexandra Bilak Madaxa Xarunta Dabagalka Barakaca Gudaha.
Degdeg iyo degenaan musiibooyinka waxa ay sabab u noqdeen barakaca dad ku dhaw 9.8 Milyan oo ruux, waxa ay ku nool badi dadkaan wadamada India iyo Bangladesh, halka ku guryo beeleen ku dhawaad 2.8 Milyan oo ruux.
Xaaladda ayaa sii xumaatay, kadib markii bishii saddexaad ee Maarso dalalka laga helay cudurka Covid-19, waxaa istaagay isu socodka dadka, waa la kala fogaaday, gacmihii ayaa is gaari waayay, balse xaalku waa uu dhamaa sidii hore.
AMISOM guarantees help for Somalia’s upcoming…
In the spotlight: the controversial…
AMISOM guarantees help for…